Kadib 20 Sano oo Baaritaan FBI ah waa rasmi: Sacuudi Carabiya Ma Dambiileen 11 -kii Sebtember Taageerada Argagixisada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Sacuudi Carabiya Warka » Kadib 20 Sano oo Baaritaan FBI ah waa rasmi: Sacuudi Carabiya Ma Dambiile 11 -kii Sebtember Taageerida Argagixisada
Airlines • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Sacuudi Carabiya Warka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Kadib 20 Sano oo Baaritaan FBI ah waa rasmi: Sacuudi Carabiya Ma Dambiile 11 -kii Sebtember Taageerida Argagixisada
Madaxweynaha Mareykanka Biden ayaa la kulmay cadaadis toddobaadyadii la soo dhaafay qoysaska dhibbanayaashu, kuwaas oo muddo dheer raadinayey diiwaannada markii ay dacwad ka geysanayaan New York oo ku eedeyneysa in saraakiisha sare ee Sacuudiga ay ku lug lahaayeen weerarada.
Sebtember 12, 2021 waxay u noqon kartaa maalin wanaagsan dalxiiska adduunka. Dabayaaqadii Sabtidii, Sebtember 12, 2021, FBI -da ayaa sii deysay dukumiintiyo cusub oo la soocay oo la xiriira weerarkii argagixiso ee Sebtember 11, 2001 ee Mareykanka.
Qoraalku wuxuu sharxayaa xiriirada ay afduubayaashu la lahaayeen saaxiibada Sacuudiga ee Mareykanka laakiin ma bixin wax caddeyn ah in dowladda Sacuudi Carabiya ay ku lug lahayd qorshaha.
FBI-da ayaa sii deysay dokumenti cusub oo 16 bog ka kooban oo la xiriira taageerada saadka oo la siiyay laba ka mid ah afduubayaashii Sucuudiga ka hor weeraradii September 11, 2001.
Warshadaha socdaalka iyo dalxiiska ee caalamiga ah ayaa sidoo kale sugayey in warbixinta FBI -da la sii daayo si ay u iftiimiso haddii Dowladda Sacuudi Carabiya ay taageerto afduubayaashii iyo argagixisadii Sebtember 11dii.
Sababta: Sacuudi Carabiya waxay dhawaan taageertay waxayna siisay hoggaan dalxiiska caalamiga ah.
Jooji aamusan ee taageeridda iyo fahamka Ujeeddada Sucuudiga ee taageerada aadka loogu baahan yahay ee dalxiiska waqtiyada aan suurtogalka ahayn ee soo mara cudurka COVID-19 oo ay ku jiraan daruuraha guusha. Tuhunka ayaa sii kordhayay maalin kasta taasoo horseedaysa sannad -guuradii 20 -aad ee weerarkii argagixiso ee 11 -kii Sebtember.
Isla markii balaayiin qof oo adduunka ah ay xusayaan 20 sano kadib Sebtember 11, madaxweynaha Mareykanka Biden wuxuu shaabadeeyay cutubkii ugu dambeeyay ee ku saabsan sii deynta dukumiintiyada qarsoon ee baaritaanka FBI ee doorka Sacuudiga - haddii ay jirto.
Setpember 12 wixii ka dambeeyay Sebtember 11, 2001 waxay ahayd maalin ka mid ah Maalinta Midnimada Mareykanka iyo dunida ilbaxnimada leh
Adduunku wuxuu u beddelay Mareykanka Sebtember 12,2001 si uu isugu keeno dalka iyo Adduunka 12 -ka Sebtember, maalin ka dib Sebtember 11.
Maanta dadka Mareykanka ah waxaa la xusuusiyey in Mareykanku mar kale is -taago. Mareykanka maanta wuxuu dhadhamiyay sida uu dalku u fiicnaan lahaa haddii dadku helaan hab ay mar kale ku midoobaan.
Siideynta dukumiintiyada FBI ma ahayn oo kaliya tallaabo caalami ah oo caqli badan, laakiin waa tallaabo muhiim u ah hannaanka bogsashada gudaha.
Waa in la ogaadaa, 20 sano ka hor Daalibaan waxay ka codsadeen Mareykanka inuusan weerarin Afghanistan. Maqnaanshaha xal diblomaasiyadeed ayaa sababay dagaal 20 sano socday, iyo cabsida laga qabo argagax badan maanta.
Dukumentiga baaritaanka FBI -da ee la sii daayay dabayaaqadii maanta, Sebtember 11,2021 wuxuu sharxayaa xiriirada ay afduubayaashu la lahaayeen saaxiibada Sacuudiga ee Mareykanka laakiin ma bixin wax caddeyn ah in dowladda Sacuudi Carabiya ay ku lug lahayd qorshaha.
Waa diiwaankii ugu horreeyay ee baaritaan oo la shaaciyo tan iyo markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu amar ku bixiyay in dib -u -eegis lagu sameeyo qalabka sannado badan ka maqnaa dadweynaha.
Dowladda Sacuudiga ayaa muddo dheer beeninaysay inay ku lug leedahay. Safaaradda Sacuudi Carabiya ee Washington ayaa sheegtay Arbacadii inay taageersan tahay in si buuxda loo shaaciyo dhammaan diiwaannada si ay "u soo afjarto eedeymaha aan salka lahayn ee Boqortooyada mar iyo dhammaanba".
Safaaraddu waxay sheegtay in eedeyn kasta oo ah in Sacuudi Carabiya ay gacan ka geysaneyso ay tahay "gabi ahaanba been abuur".
Dowladda Sacuudiga ayaa beenisay inay lacag u dirtay laba ka mid ah afduubayaashii 11-kii Sebtember, Khalid al-Mihdhar, bidix, iyo Nawaf al-Hazmi
Madaxweynaha Mareykanka Biden ayaa todobaadkii hore ku amray Waaxda Caddaaladda iyo wakaaladaha kale inay sameeyaan dib -u -eegis dib -u -eegis ah oo ku saabsan dukumiintiyada baaritaanka ayna sii daayaan wixii ay awoodaan lixda bilood ee soo socota.
16 bog ayaa la sii daayay habeenimadii Sabtida, saacado kadib markii Biden uu ka qeyb galay munaasabadaha xuska 11ka Sebtember ee New York, Pennsylvania, iyo waqooyiga Virginia. Ehelada dhibanayaasha ayaa horay u diidanaa joogitaanka Biden ee xafladaha xafladaha ilaa inta dukumiintiyadu ay yihiin kuwo la kala saaray.
Rikoodhka aadka loo hagaajiyay ee la sii daayay Sabtidii wuxuu sharxayaa wareysi lala yeeshay 2015 qof codsanayay dhalashada Mareykanka sanado ka horna wuxuu xiriir soo noqnoqday la yeeshay muwaadiniinta Sucuudiga oo baarayaashu ay sheegeen inay “taageero saadka oo muhiim ah” siiyeen dhowr ka mid ah afduubayaasha.
Maamulka Biden ayaa bishii Febraayo sii daayay qiimeyn sirdoon oo ku lug leh dhaxal sugaha Maxamed Bin Salmaan dilkii saxafiga Jamal Khashoggi ee fadhigiisu ahaa Mareykanka 2018 laakiin wuxuu dhaleeceyn kala kulmay Dimuqraadiyiinta inuu ka fogaaday ciqaab toos ah oo loo geysto amiirka dhaxalsugaha ah.
Marka laga hadlayo Sebtember 11, waxaa jiray warar la isla dhexmarayay oo ku saabsan ku lug lahaansho rasmi ah tan iyo waxyar ka dib weerarada, markii la ogaaday in 15 ka mid ah 19 -ka weerarka ay ahaayeen Sacuudi. Usaama Bin Laadin, oo xilligaas ahaa hoggaamiyaha Al-Qaacida, wuxuu ka soo jeeday qoys magac ku leh boqortooyada.
Mareykanka ayaa baaritaan ku sameeyay qaar ka mid ah diblomaasiyiinta Sacuudiga iyo kuwo kale oo xiriir la leh dowladda Sacuudiga kuwaas oo yaqaanay afduubayaasha ka dib markii ay yimaadeen Mareykanka, sida ku cad dukumiintiyo horay loo shaaciyay.
Wali, warbixintii Komishanka 9/11 ayaa la helay "wax marag ma doon ah in dawladda Sucuudigu hay’ad ahaan ama madaxda sare ee Sucuudigu si gaar ah u maalgeliso”Weeraradii ay maleegayeen al-Qaacida. Laakiin guddigu wuxuu sidoo kale xusay "suuragalnimada" ay samaysay hay'adaha samafalka ee ay taageerto dowladda Sucuudiga.
Baaritaan gaar ah ayaa ku wajahan labadii afduub ee ugu horreeyay ee yimid Mareykanka, Nawaf al-Hazmi iyo Khalid al-Mihdhar. Bishii Febraayo 2000, waxyar ka dib markay yimaadeen koonfurta California, waxay kula kulmeen makhaayad xalaal ah muwaadin Sacuudi ah oo lagu magacaabo Omar al-Bayoumi oo ka caawiyay inay helaan oo kiraystaan ​​guri ku yaal San Diego, xiriirna la lahaa dawladda Sucuudiga horena u soo jiitay baaritaanka FBI. .